Isandi sesinye Isandla
Iimbali-mlando zezobugcisa ziye zenza umdla kuHakuin Ekaku (1686-1769) kwiminyaka yamuva. Imifanekiso yobudala be-inki ye-ink yebhayinti kunye ne-calligraphy zixabiswa namhlanje ngenxa yokutshabalalisa kunye nokugubha. Kodwa nangaphandle kwimizobo, impembelelo kaHakuin kwiJapan yaseJapan ayinakwenzeka. Waguqula isikolo saseRinzai Zen . Imibhalo yakhe iphakathi kwezona zikhuthazayo zincwadi zaseJapan. Wadala i- koan eyaziwayo, "Kuyintoni isandi sesandla esinye?"
"UMtyholi ohlala emkhombeni"
Xa wayeneminyaka engama-8 ubudala, uHakuin wayiva intshumayelo yomlilo kunye ne-sulfure kwiintlungu ze-Hell Realm. Inkwenkwe ekhwantyekayo yagqithisa isihogo kunye nendlela yokuphepha ngayo. Xa eneminyaka eyi-13 wagqiba ekubeni ngumfundisi waseBuddhist. Wafumana ukulungiswa komonakalisi kumfundisi waseRinzai eneminyaka eyi-15.
Njengomfana, uHakuin wayehamba esuka kwelinye ithempeli waya kwelinye, efunda ixesha kunye nootitshala abaningana. Ngo-1707, eneminyaka engama-23 ubudala, wabuyela eShoinji, etempileni kufuphi neNtaba yaseFiji apho wayeqale wamiselwa khona.
Ngelo busika, iNtaba iFuji yaqhuma ngamandla, kwaye iinyikimazi zagubha uSubinji. Ezinye iidonki zabalekela etempileni, kodwa uHakuin wahlala e-zendo, ehleli e- zazen . Wazixelela ukuba ukuba wayesaqonda ukukhanyiswa amaBuddha aya kumkhusela. UHakuin wahlala iiyure, waxhamla kwi-zazen, njengoko i-zendo yazamazama ngakuye.
Ngomnyaka olandelayo, waya enyakatho waya kwelinye itempile, e-Eiganji, kwiPhondo le-Echigo.
Kwaphela ezimbini iiveki wahlala e-zazen ngobusuku. Ngenye intsasa, ekuphumeni kokuntwela kokusa, weva intsimbi yetempile kude. Isandi esiqhaqhaqhazelayo sasidlula kuye njengendudumo, kwaye uHakuin waqaphela.
Ngokwe-akhawunti kaHakuin, ukuzaliseka kwamgcwala ngokuzidla. Akukho mntu kwiminyaka emakhulu mathathu ubudala oye wafumana ukuqonda okunjalo, wayeqinisekile.
Wafuna uthisha waseRinzai ohlonishwa kakhulu, uShoju Rojin, ukuba amxelele iindaba ezilungileyo.
Kodwa uSjuju wabona ukuziqhenya kukaHakuin kwaye akayi kuqinisekisa ubungqina. Esikhundleni salokho, wayebeka uHakuin kwisifundo esiqinileyo esinokuthi, ngexesha lonke ebiza ngokuthi "umtyholi ohlala emqolombeni." Ekugqibeleni, ukuqonda kukaHakuin kwahluma ekugqibeleni.
UHakuin waba ngu-abbot waseShoinji eneminyaka engama-33 ubudala. Ithempeli elidala lashiywa. Kwakuseburhulumenteni; izixhobo zasebiwe okanye zitshitshiweyo. UHakuin wayehlala kuqala apho. Ekugqibeleni, iidonki kunye nabantu baqala ukumfuna ukuba afundise. Wayefundisa i-calligraphy kulutsha lwasekhaya.
KwakuseShoinji apho uHakuin, owayeneminyaka engama-42 ubudala, waqaphela ukukhanya kwakhe kokugqibela. Ngokwe-akhawunti yakhe, wayefunda iLotus Sutra xa evile ikriketi engadini. Ngokukhawuleza ukugqibela kwakhe kokungabaza kwagqiba, waza wakhala.
Kamva ebomini bakhe, uHakuin waba ngu-abbot waseRyutakuji, namhlanje iindwendwe ezithandwa kakhulu kwiPhondo laseShizuoka.
Isikolo saseRinzai eJapan sasiye sayehla ukusuka ngekhulu le-14, kodwa uHakuin wavuselela. Uye wathintela ngokupheleleyo bonke abafundisi beRinzai ababeza emva kwakhe ukuba iJapan i-Rinzai Zen nayo ingabizwa ngokuthi yiHakuin Zen.
Njengokuba kwenza ootitshala abakhulu beChin kunye noZen phambi kwakhe, uHakuin wagxininisa i-zazen njengomsebenzi obaluleke kakhulu. Wafundisa ukuba izinto ezintathu zibalulekile kwi-zazen: ukholo olukhulu, ukungathandabuzeki okukhulu, nokuzimisela okukhulu. Wenza ucwangco lwe-koan, ukulungiselela ii-koans zendabuko kwi-oda elithile ngezinga lobunzima.
UHakuin uqalise ukufundiswa kwe-koan nomfundi omtsha kunye ne-koan eyadalayo- "yintoni isandi [okanye ilizwi] kwesandla esinye?" Ngokuqhelekileyo iguqulelwe ngokungafanelekanga ngokuthi "isandi sokubetha ngesandla," isandla esisodwa " sikaHakuin " okanye i- sekishu , mhlawumbi i-Zen koan eyaziwayo kakhulu, abantu abodwa baye bakuva nangona bengenayo into yokuba "iZen" okanye "koan" .
Inkosi yabhala "ngesandla esinye" kunye neKannon Bosatsu, okanye i- Avalokiteshvara Bodhisattva njengoko ichazwe eJapan - "'Kannon' kuthetha ukugcina isandi.
Ukuba uyayiqonda le ngongoma uya kuvuswa. Xa amehlo akho akwazi ukubona, ihlabathi lonke liyiKannnon. "
Kwakhona wathi, "Xa uzivalela ilizwi leNye Yona, nantoni na oyenzayo, nokuba unandipha isitya selayisi okanye uthabathe indebe yetiyi, yonke into uyenzayo kwi- samadhi yokuhlala kunye nomntu ofumana iBuddha -mind. "
NgoHakuin, ubugcisa beyona ndlela yokufundisa i-dharma. Ngokomphengululi weHakuin uKatsuhiro Yoshizawa weYunivesithi yaseHanazono eKyoto, eJapan, uHakuin mhlawumbi wadala amashumi amawaka emisebenzi yobugcisa kunye ne-calligraphy ebomini bakhe. Iprofesenti Yshizawa yathi: "Ingqalelo enkulu yeHakuin njengomculi wayehlala echaza ingqondo ngokwabo kunye noDharma ngokwayo." Kodwa ingqondo kunye nedarma zikho ngaphaya kobunzima nokubonakala. Uzichaza njani ngqo?
U-Hakuin wasebenzisa inki kunye nopende ngeendlela ezahlukeneyo zokubonakalisa i-dharma kwihlabathi, kodwa umsebenzi wakhe ngokubanzi ukhangela ukutsha nokukhupha. Waqhekeza kunye neengqungquthela zexesha ukuphuhlisa indlela yakhe. Ukuqhaqhazela kwakhe, ngokukhawuleza, njengokuba kuboniswe kwiimpawu zakhe ezininzi zeBodhidharma , kwaza kubonisa imibono ephakamileyo yezobugcisa beZen.
Walingisa abantu abaqhelekileyo-amasoldati, abakhandi, abalimi, abaceli, abaononki. Wenza izinto eziqhelekileyo njengezinto zokubambisa kunye nezixhobo ezenziwe ngesandla. Imibhalo ebhalwe ngeempendulo zathi ngezinye iinkhathi zithathwe kwiingoma ezithandwayo kunye neendinyana kunye nezivakalisi zentengiso, kungekhona nje iincwadi zeZen. Kwakhona kwakukho ukuhamba kwezobugcisa baseJapan bexesha.
UProfesa Yoshizawa wachaza ukuba iHakuin yatshatile i-Mobius imichilo - i-loop ephihliweyo ngecala elinye-inkulungwane ngaphambi kokuba ifunyanwe ngu-Agasti Mobius.
Kwakhona wabhala ngepeyinti ngaphakathi kwimizobo, apho izifundo ezenziwe kwimifanekiso yakhe zihlobene nomnye umzobo okanye umqulu. "Ngokwenene, uHakuin wayesebenzisana neendlela zokubonakalisa ezifana nezo zenziwe ngeenkulungwane ezimbini kamva uRene Magritte (1898-1967) kunye noMaurits Escher (1898-1972)," UProfesa Yoshizawa uthe.
"Ukusuka elwandle lokungabi nantoni, vumela inceba yakho enkulu ingabonakali." - Hakuin
UHakuin wabhala iileta, iingqungquthela, iingoma, iincwadana kunye neentetho zeDharma, kuphela ezinye zazo eziguqulelwe kwisiNgesi. Kuzo, mhlawumbi eyaziwa ngokuba yi "Ingoma yeZazen," ngamanye amaxesha kuthiwa "Ukudumisa iZazen." Le ngxenye nje encinci ye "ingoma," esuka ekuguquleleni kukaNorman Waddell:
Inqabileyo kwaye ikhululekile isibhakabhaka saseSamádhi!
Khanyisa ukuphela kwenyanga yobulumko!
Ngokwenene, akukho nto ekhoyo ekhoyo ngoku?
I-Nirvana ilapha apha, phambi kwamehlo ethu,
Le ndawo yindawo yeLotus Land,
Lo mzimba, uBuddha.
Izicwangciso zokuqeshwa koTitshala
Yintoni uMakaki weBhola kwiGalofu?
Imfazwe Yeminyaka Emakhulu: Imfazwe yaseCreation
I-Salisbury University Admissions
Amacandelo ama-5 aphezulu kwi-History of Rockets 'History
Isikhokelo seNyathelo-ngeNyathelo-ndlela yokusebenzisa i-SQLite ukusuka kwi-C # Isicelo
Ukuthunyelwa kweThuthi kunye nokuPhathwa kweziNdlovu
I-BERTRAND - Igama lomnqophiso weNkcazelo kunye neNtsapho
Indlela yokubulisa iJamani - ngokusemthethweni nangokungaqhelekanga
Insikelela Yakho Isihlahla
Uhlobo lwe-Harley Davidson XL 1200N Sportster Nightster